Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » abantu » Undwendwelo lweCarlsbad lubhengeza iGosa eliyiNtloko lesiGqeba sokuLawula
Iindaba zeManyano • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ndwendwela uCarlsbad ubhengeza umphathi omtsha, uKim Sidoriak
Kwindima yakhe entsha njengo-Mongameli kunye ne-CEO yeNdwendwe eCarlsbad, uKim ujonge ukusebenzisana noluntu kunye namashishini endawo ukukhuthaza ngcono indawo ekuyiwa kuyo kunye nokudibanisa utyelelo lweCarlsbad kunye nesixeko kunye neshishini ngalinye. Uceba ukuphakamisa indawo yokufikela kwinqanaba likazwelonke kunye nokwandisa ukubonakala kwiimarike eziphambili, ngelixa esebenzisa uphando lwedatha ukwenza izigqibo ezinolwazi malunga nobubanzi kunye nokunikezelwa kombutho.
Intlangano yokuthengisa indawo yeSixeko saseCarlsbad, eCalifornia ichaza i-CEO entsha.
UKim Sidoriak wayeliGosa eliyiNtloko leNtengiso eSanta Monica kwezoKhenketho noKhenketho ngaphambi kokuthatha indawo yokuya eCarlsbad.
Ndwendwela iCarlsbad ijolise ekuphakamiseni iCarlsbad njengenye yeendawo eziphambili zokhenketho eSouthern California.
Ndwendwela iCarlsbad, umbutho wentengiso weSixeko saseCarlsbad, ubhengeze ukubekwa kukaMongameli omtsha kunye ne-CEO, uKim Sidoriak.
Phambi kokujoyina iqela laseCarlsbad lokundwendwela, uKim wayeliGosa eliyiNtloko leNtengiso le Santa Monica Ukuhamba noKhenketho apho wayenoxanduva lwesicwangciso-qhinga, amaqhinga kunye neenkqubo ezomeleza inzala, ibango kunye nokwamkelwa kweSanta Monica.
Ngale ntshukumo, uKim uza kusebenza ne Ndwendwela iCarlsbad Iqela kunye nabachaphazelekayo ababalulekileyo ukuphakamisa iCarlsbad njengenye yeendawo eziphambili zokhenketho eSouthern California.
At Santa Monica Ukuhamba kunye noKhenketho, igalelo likaKim libandakanya ukulungisa indawo yesazisi sikaSanta Monica kunye nokwazisa isicwangciso sobuchule seminyaka emi-5 sombutho. Ulilungu leKhenketho laseBrazil laseCalifornia kunye neKomenti yokuFumana kwaye ufumene isiqinisekiso sokuLawulwa kweNdawo esiQinisekisiweyo kwiNdawo yeZizwe ngeZizwe.
Ukufudukela eCarlsbad, kuzisa uKim kufutshane nosapho kwaye uKim uceba ukuba lilungu lexesha elide kuluntu lwasekhaya nakwingingqi yeSan Diego North County. “Ndiyavuya ukuba kufutshane nosapho olwandisiweyo, kwaye ndikulangazelela kakhulu ukuba lilungu elikhutheleyo loluntu lwaseCarlsbad,” utshilo uSidoriak, obekhe wadlala indima kwezentengiso kunxibelelwano lweHilton Hotels Corporation kunye neNtengiso ye Saatchi & Saatchi.
Kwindima yakhe entsha njengoMongameli kunye ne-CEO ye Ndwendwela iCarlsbad, UKim ujonge ukusebenzisana noluntu kunye namashishini endawo ukukhuthaza ngcono indawo ekuyiwa kuyo kunye nokudibanisa utyelelo lweCarlsbad persona kunye nesixeko kunye neshishini ngalinye. Uceba ukuphakamisa indawo yokufikela kwinqanaba likazwelonke kunye nokwandisa ukubonakala kwiimarike eziphambili, ngelixa esebenzisa uphando lwedatha ukwenza izigqibo ezinolwazi malunga nobubanzi kunye nokunikezelwa kombutho.
"UKim uzisa umxube ogqibeleleyo wamava, inyathelo kunye nobuntu bokukhokela uxanduva lombutho oya kuyo kwesi sahluko sikhulayo," utshilo uTroy Wood, uSihlalo weBhodi yokundwendwela iCarlsbad. "Ukuthanda kukaKim, ukuqhuba kunye nokukwazi ukusebenzela ukuphucula isixeko kuya kunceda ukuphakamisa umbutho kunye nesixeko kunye."
UKim ufumene iBachelor yoBugcisa kwezonxibelelwano kwiDyunivesithi yaseSouthern California kwaye eyona nto ayithandayo kukuhambahamba emhlabeni ukuya kufunda malunga neenkcubeko ezahlukeneyo.